Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » SAS ambony amin'ny Fly Quiet sy Green
Scandinavian Airlines System (SAS) no nitana ny laharana voalohany tamin'ny latabatra ligy 'Fly Quiet and Green' ho an'ny Q4. Ny zotram-piaramanidina dia nitazona ny toeran'ny tsatokazo fahefatra telo nisesy, nanasongadina ny ezaky ny mpitatitra hanatsara ny fahombiazan'ny asa ary hampiasa vola amin'ny A320neos maitso sy mangatsiaka kokoa.
A320neos dia nanova ny tendron'ny elatra, mampihena ny fandoroana solika ary ahafahan'izy ireo manidina mahomby kokoa. Ny sidina ho an'ny taranaka fara mandimby dia sidina fito isan-jato avy any Heathrow ary ampiasain'ny kaompaniam-piaramanidina valo miorina amin'ny seranam-piara-manidina toa an'i British Airways, SAS, Lufthansa, Air Malta, Iberia ary TAP, izay samy manana ny laharana voalohany amin'ny 20 voalohany amin'ity telovolana ity. Latabatra ligy 'Fly Quiet and Green'.
Ny SAS dia narahin'ny Air Malta, izay niakatra toerana telo hatramin'ny laharana faharoa tamin'ny telovolana farany tamin'ny taona 2020. Ny Air Malta koa dia nanangana A320neos vaovao nandritra ny taona 2019 ary ny zotram-piaramanidina koa dia nitazona ny fahombiazan'ny asany amin'ny fampiharana hatrany. Fanatonana mendrika sy hialana amin'ny fahatongavan'ireo tara na tara. Nahazo ny laharana fahatelo ny Oman Air tamin'ny Q4, ary izy no mpitatitra lavitra indrindra tao amin'ny seranam-piara-manidina.
Ny mpivezivezy lehibe indrindra ho an'ny Q4 dia ny Austrian Airlines izay nianika toerana 16, avy teo amin'ny laharana faha-28 ka hatramin'ny laharana faha-12. Ny fampiasam-bolan'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny A320 dia nampiakatra be ny isa azony, miampy ny fihenan'ny mpifaninana tara ary tara izay nanampy tamin'ny fanatsarana ny fanatsarana.
Heathrow dia lasa iray amin'ireo tobim-piaramanidina voalohany manerantany lasa tsy miandany amin'ny karbaona, ho an'ny fotodrafitrasa, ary ankehitriny ny seranam-piaramanidina hub dia lasa lavitra kokoa amin'ny alalàn'ny taona 2030 voalohany. Heathrow dia lasa iray amin'ireo tobim-piaramanidina voalohany manerantany lasa tsy miandany amin'ny karbaona, ho an'ny fotodrafitrasa, ary ankehitriny ny seranam-piaramanidina hub dia mandroso kokoa, amin'ny alalàn'ny voalohany namorona drafitra handeha aotra karbaona. Ny drafitra dia manoritra ireo fampiasam-bola izay mbola hataon'i Heathrow amin'ny fotodrafitrasa ao aminy, ary koa ny fomba hiasan'ny seranam-piaramanidina amin'ireo mpiara-miombon'antoka sy orinasa hiasa amin'ny fanaparitahana ny sidina sy ny asa an-tany.
Ny CEO CEO London Heathrow, John Holland-Kaye dia nilaza hoe: "Nandritra ny folo taona lasa, Heathrow dia nametraka ny làlan'ny fitomboan'ny atin'ny karbaona amin'ny alàlan'ny famoronana ny tabilaon'ny ligy Fly Quiet sy Green, fampiasam-bola amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tantsaha UK mba handoavana ny entam-barotra ary hanombohana ny asa amin'ny fanavaozana ny habakabaka izay hampihena ny fandefasana entana amin'ny sidina. Ny sidina dia matanjaka ho an'ny tsara ary miara-miasa akaiky amin'ny indostria izahay mba hahazoana antoka fa aotra net ny zero amin'ny 2050. ”
Lars Andersen Resare, Lehiben'ny faharetana ao amin'ny SAS, nanampy:
"Ny SAS dia manolo-tena amin'ny fampihenana ny fandefasana azy 25 isan-jato amin'ny 2030 ary mamokatra hatrany ny vokatra sy serivisy maharitra. Raha tsy misy ny mpiasa manokan-tena sy ny asany mahafinaritra, manerana ny asanay rehetra, tsy ho tanteraka izany. ”
Ny latabatra ligin'ny Fly Quiet sy Green dia nanampy tamin'ny fampivoarana an'ity olana ity tamin'ny 2014 ary nandray anjara toerana lehibe tamin'ny fanovana ny fiaramanidina tao Heathrow. Ny fanoloana ireo karazana fiaramanidina taloha ho an'ny vaovao, madio kokoa ary milamina kokoa toy ny A350, A320neos ary 787 Dreamliners dia nampihena ny isa CAEP (fenitra famoahana) ny seranam-piaramanidina ampahatelony. Ny metatra fandefasana dia nitana andraikitra lehibe ihany koa tamin'ny fanomezana fitsaharana ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka marobe manatsara ny fitanana ny làlany sy ny fanatonany ny fomba fitohizan'ny fiaviana maharitra.
Ny fampahalalana momba ny programa Fly Quiet sy Green, miaraka amin'ny latabatra ankehitriny sy ny laharana teo aloha dia hita eto: http://www.heathrowflyquietandgreen.com/
ICTP mitehaka SAS.
Nilaza ny fanadihadiana fa TSIA amin'ny ITB Berlin
Nanafoana ny matso Fetibe i Duesseldorf sy Cologne, Alemana: Andao hivavaka isika!